ဖြစ်ရပုံများပြောပါတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဖြစ်ရပုံများပြောပါတယ်
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Feb 24, 2012 in Creative Writing | 20 comments
ကျွန်မငယ်ငယ်က ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့တောင်တွေကြားကမြို့လေးမှာနေခဲ့ရတာပါ။ တောင်တွေကြားထဲမှဆိုတော့တော်တော်ကိုအေးပါတယ်။ နေဆိုတာကလဲ မနက် ၉ ညနေ ၃ ပဲရပါတယ်။ နောက်တောင်ကြားထဲလဲဖြစ်၊ အနားမှာတောတွေတောင်တွေပဲရှိပြီးတခြားရှမ်းရွာတွေနဲ့အဆက်သွယ်ပြတ်ပါတယ်။ နယ်မြေကလဲမအေးချမ်းသေးပါဘူး။ မြို့ ဖြစ်လို့အမဲရောင်နယ်မြေတော့မဟုတ်ပေမဲ့အညိုရောင်အဆင့်တော့ရှိပါသေးတယ်။ အနားကရှမ်းရွာတွေကိုသွားမလည်ရဲပါဘူး။ လုံခြုံရေးစိတ်မချရလို့ပါ။ အခုတော့ အနားကရှမ်းရွာတွေကိုသွားလည်နေကြတာတွေ့ရတော့ကျွန်မငယ်ငယ်ကအဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြီးသတိရမိပါတယ်။ ကျွန်မတို့မြို့ကလေးဟာ မြို့ထက်စာရင် စစ်တပ်ကပို များပါတယ်။ မြို့ပြင်မှာဆိုရင်စစ်တပ်ချည်းပါပဲ။ စစ်တပ်များတော့ ရှေ့တန်းပြန်ကလဲ တလတခါလောက်ကြိုရပါတယ်။ အဲတုန်းကကျွန်မတို့ကစစ်သားတွေကို တအား ချစ်ပါတယ်။ မြို့ကလဲစစ်သားဆိုရင်အစစ အရာရာကူညီပါတယ်။ ရှေ့တန်းပြန်ဆိုလဲ မြို့လုံးကျွတ်သောင်းသောင်းဖြဖြကြိုကြပါတယ်။ ပျော်စရာကြီးပေါ့ရှင်။ စစ်တပ်တခုခု ကများအကျများပြီဆိုရင်ကိုယ့်သွေးသားပါသလိုတမြို့လုံးစိတ်မကောင်းကြပါဘူး။ အေးချမ်းတဲ့မြို့လေးပေါ့ရှင်။ အညိုရောင်နယ်မြေဆိုပေမဲ့ဘာအနှောက်အယှက်မှမ ရှိပဲအေးအေး ချမ်းချမ်းနေလာရာကနေ တရက်တော့ဘယ်ကနေဘယ်လို သတင်းတွေထွက်လာတယ်မသိဘူး။ မြို့ကတပ်တွေကလဲတပြိုင်နက်လိုလိုရှေ့တန်းထွက်နေ တဲ့အချိန်ပေါ့။ မြို့ကို သူပုန်ဝင်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတော်တော်ထွက်နေတာပေါ့။ မြို့ကလဲကြောက်တာပေါ့။ ညဆိုတမြို့လုံးခြောက်ကပ်ပြီးလူသွားလူလာလဲမရှိ။ အ သံတောင်မထွက်ရဲ ဘူးပေါ့။ ကျွန်မတို့ကအမဲရောင်နယ်မြေကပြောင်းလာပြီး ကိုယ်တိုင်လဲတိုက်ပွဲတွေကြုံခဲ့ဖူးတော့ပိုကြောက်တာပေါ့။ အဲလိုနဲ့ ည ကိုခြောက်ခြောက် ခြားခြားနဲ့ သတိဝီရိယ ထားပြီးအိပ်လိုက်ကြတာ မနက် လင်းအားကြီး ၄ နာရီလောက်ကျတော့ တောင်ပေါ်ကနေ မြင်းခွာသံတွေ အများ ကြီးကြား ရတယ်။ ဒုန်းစိုင်းစီးလာတဲ့အသံပေါ့။ မြို့ကတော့ တွက်လိုက်တယ်။ သွားပြီသူပုန်တွေဆင်းလာပြီပေါ့။ အိမ်ထဲမှာငြိမ်ပြီးနားထောင်နေတုန်း ဒိုင်းကနဲဆိုအသံကြား လိုက်ရတယ်။ သေချာပြီ သူပုန်တွေသေနပ်ပါလာပြီပေါ့။ ဒါပေမဲ့နောက်ဘာသံမှဆက်မကြားရတော့ဘူး။ အဲဒါနဲ့အနားကရွာတခုခု ကိုတော့ဝင်ပြီပေါ့ဆိုနေကြရောပေါ့။ အဲဒီနေ့ကလဲဈေးနေ့လေ။ ကျွန်မတို့မြို့က ၅ ရက် တဈေး လေ။ အဲဒါနဲ့မနက် ၆ နာရီလောက်ကြတော့စနည်းနာထွက်ကြတာပေါ့။ မြင်းခွာသံက ဘာလဲ။ သေနပ်သံက ဘာလဲပေါ့။ သိလိုက်ရပါ တယ်။ မြင်းခွာသံက ဈေးနေ့ ကို ဈေးလာခင်းတဲ့တောင်ပေါ်ရွာကဈေးသည်တွေတဲ့။ သူတို့ကမြင်းနဲ့လာတာတဲ့။ ခါတိုင်းလဲမြင်းနဲ့လာတာပါပဲတဲ့။ မြို့ကအိပ်နေလို့မသိတာပါတဲ့။ ကဲထားပါ။ သေနပ်သံ က ကောဆိုတော့ ဈေးပတ်ကား ( ၅ ရက်တဈေးကိုလိုက်ရောင်းတဲ့အဝေးဈေးသည်တွေကိုစုတင်လာတဲ့ကား ) ဘီးပေါက်တာပါတဲ့။ သြတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါရှင်။ ကြံကြံဖန်ဖန်ဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီး ကျွန်မတို့ မှာရီပွဲဖွဲ့လိုက်ရတာ။ ညတုန်းကကြောက် ခဲ့တာတွေမေ့ကုန်ရောပဲ။
ဟီး ဒါဆို အစ်မကြီးသဲနုတော့ တော်တော်ကြောက်ပုံရတယ်။
တူဂျီး ဥကိုင်ရဲ့ နှလုံးပြူး သေနတ်ကြီးကိုကြောက်လို့
တော်သေးတာပေါ့ သဲနုအေးရေ။ အဲဒီ အချိန် တထိတ်ထိတ်နဲ့ အိပ်ပျော်သွားတဲ့ သူ တစ်ယောက်ယောက်ကများ အိပ်မက်ထဲအထိ စိတ်စွဲပြီး တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် “သူပုန်တွေ ဝင်လာပြီ ပြေးကြဟေ့” လို့ အသံကျယ်ကြီးနဲ့ ယောင်အော်လိုက်လို့ကတော့ ………………
အောင်မယ်လေး ပြေးလိုက်ကြမယ်အမျိုး။ တိတ်နေတော့အသံအကျယ်ကြီးထွက်လာမှာသေချာတယ်။
ကျွန်တော်ဆို ချစ်သူနဲ့ လက်တွဲပြီးလမ်းလျှောက်ရင်တောင်
ကြောက်တတ်တယ် ဆိုလို့ ပြောရဦးမယ် အစ်မရေ ….
၅ နဲ့ ၇ ကြားမှာ ခြောက်ခြား မယ်တဲ့ခင်ဗျ…
အိမ်နောက်ဖေးကိုလည်း သေချာကြည့်လိုက်ဦးနော် …. မောင်ဘိုဂျီး ရှိနေဦးမယ်….
နှမတော် thel nu aye ရယ်နောက်တစ်ခါ သေနတ်သံကြားရင် မောင်တော်ဆီပြေးခဲ့။…:P
အောင်မယ်ငီး။တော်ပါပြီ သေနပ်ပဲအပစ်ခံလိုက်တော့မယ်။ ဒါဘဲကောင်းဒယ်။
ဟုတ်ပါ့မလားမောင်ကာလုရဲ့ ဖိုက်ပြီးရင်ဖုသွားတာမဟုတ်လား။ ဖုပြီးရင်ဆက်ဗျင်း ( ဆဲဗင်း ) ခံရရော။ ဟဲဟဲ။
ဖတ်ရင်းနဲ့တောင် တကယ် သူပုန်ဝင်တော့မလားလို့ တထိပ် ထိပ် နဲ့
နောက်တော့မှ အော်..လို့ သက်ပြင်းချနိုင်တယ်…
တတ်လဲ တတ် နိုင်ပါပေ့..(စာအရေးအသားလေး)
မောင် ပေ အီးပေါက်သံဆို ဗုံးကွဲတဲ့အသံလောက် ကျယ်တာကလား..
တစ်ခါ အီးပေါက်တာ မိန်းမတောင် နားတစ်ဘက်လေးချင်သလို ဖြစ်သွားလို့ မနဲ့ ကုထားရတယ် ပြောတယ်
ဟုတ်ပ ကျုပ် ရန်ကုန်မှာ စိန်ပေါက်ပေါက် နဲ့ တစ်ခါလား တွေ့ ရတယ် ။ သူ့ ခဗျာ အကုန် ကန်းကုန်ရှာတယ် ။
ဟဲ့ စိန်ပေါက်ပေါက် အန်တီ သဲနုအေး တို့ဆီမှာ ည အိပ်သွားရင် လေစာ စားမသွားနဲ့..
ညဉ်းလုပ်တာနဲ့ တရွာလုံး လန့်ကုန်မယ် ကြားလားအေ့..။
အဲ့လို ရွာရဲ့ အငွေ့သက်လေးတွေ … ခံစားဖူးချင်တာ … ။
ရွာဆိုလို့ နှစ်ခါလားပဲ ရောက်ဖူးတယ် ဒါတောင် သူများတွေနဲ့ ကပ်လိုက်ပေလို့ပဲ … ။ အဘိုးဘွားတွေဂျပန်ခေတ်ကတည်းက .. ရန်ကုန်ရောက်လာပြီး … ရွာမှာတောင် ဘယ်သူမှ မကျန်ခဲ့ဘူးတဲ့လေ … တစ်ခါတစ်လေ … အပန်းဖြေသွားချင်လျှင်တောင် … ဘယ်မှသွားလို့မရဘူး … ။
ယောက်မရဲ့ အဖွားဖြစ်သူ သေတုန်းက .. သူတို့ ရွာလေး လိုက်သွားဖူးတယ် .. နေ့ချင်းပြန်သွားတာပါ … ။ မီးလည်းမရှိ … ဈေးလည်း မရှိနဲ့ .. ခဏတဖြုတ်ကတော့ ပျော်စရာကြီးပဲ ….
ရွာအကြောင်းသိချင်ရင်ရွာမှာ ၈၈ ခုနှစ် ၁ နှစ်လုံး နေခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ စပါးစိုက်တဲ့ အကြောင်း၊ တောအကြောင်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်အကြောင်းရေးစရာတွေအများကြီး။ အကြာမီလာမည်မျှော်။
ဖတ်ရတာ ကိုယ်တိုင် အဲဒီမှာ ရှိနေသလို ဘဲ။
အရေးကောင်းလိုက်တာ။ တော်သေးတာပေါ့။ ဘာမှမဟုတ်လိုက်လို့။
မြန်မာ ပြည်က အဲဒီ နယ်စွန် နယ်ဖျား နေရာတွေ အားလုံးလိုလို ဒီလိုတွေ များတယ်ထင်ပါ့။
၈၈ က တော့ ရန်ကုန်မြို့ ပေါ်မှာတောင် သူပုန်ဝင်ပြီး အိမ်တွေကို လုမယ်ကြားလို့ ညည ကို ကင်းစောင့်ပြီး အိပ်ကြရတာ။
လူအချင်းချင်း ကို လောဘ၊ ဒေါသ တွေ ဖုံးလို့ မုန်းတီးခြင်းတွေ နဲ့ နေနေ ရသမျှ အပြစ်ကင်း တဲ့ ပြည်သူတွေ က မြေဇာ ပင်ဖြစ်နေမြဲပါဘဲ၊
ဇာတ်လမ်း လေးတွေ ဆက်ပါဦး။ :-)
ဟုတ်အရီးလတ်ရေ။ ငယ်ငယ်ကအဖေကအစိုးရ၀န်ထမ်းဆိုတော့နယ်စုံပြောင်းခဲ့ရတော့ အတွေ့အကြုံတော့တော်တော်များပါတယ်။ နောက်မှ တောဓလေ့လေးတွေရေးပါအုံးမယ်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တနှစ်ဝင်လာတာ။ နဲတဲ့အတွေ့အကြုံမဟုတ်ဘူးနော်။ ဟဲဟဲ။